आज कुकुर तिहार कसरि मनाइन्छ त हेर्नुहोस । – RadioMBC
Home > Front News > आज कुकुर तिहार कसरि मनाइन्छ त हेर्नुहोस ।
२० कार्तिक २०७५, मंगलवार ११:०२
कागलाई त खुवाइयो अनि पूजा गरियो नि हैन ? यसपालाको यमपञ्चकको दोश्रो दिन अर्थात कुकुर तिहार दैलोमा आइपुग्यो है । काग एउटा पंक्षी भएकाले यसलाई भेट्न या छुन त अफठेरो छ, परैबाट खाना राखिदिएर अनि उक्ति निकालेर कागलाई मालासम्म पहिर्याउने चलन छ । हिजो कागको दिन थियो भने आज मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि मानवजातिको प्रिय साथीको रूपमा रहँदै अाएको कुकुरको दिन । यस दिन थरिथरिका माला लगाएर कुकुरहरु बाटाघाटामा ठाँठिएका देख्न सकिन्छ,
कत्तिलार्इ कुकुरको भुकार्इ दिक्कलाग्दो बन्नसक्छ तर उसको भुकार्इ सुरक्षार्थ भरपर्दो संकेत पनि हो । जसका कारण कुकुर अझैपनि असली पहरेदार बनिरहेको छ । घर फर्किंदा पुच्छर हल्लाँउदै लुरुक्क छेउमा आउने कुकुरहरु वास्तवमैं मानव समाज अनि परिवारको एउटा अभिन्न सदस्य हुन भन्ने कुरा अन्यथा नहोला ।
साना ठूला, डल्ले, भुक्के, ख्याप्टे अनि बिभिन्न विदेशी स्वदेशी प्रजातीका कुकुरहरु छरछिमेकमा देख्न सकिन्छ । आजभोली त कुकुरलाई अझ विशेष रौनक र चाखका साथ देश विदेशमा पाल्ने गरिन्छ, कुकुरका विभिन्न विदेशी नश्लहरु खरिद गर्न राम्रै खल्ति खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ विकसीत देश, शहरहरुमा कुकुरहरुलाई अत्यन्त शानदार तरिकाले पालिने गरिन्छ। बिहान बिहान डोरी सहित कुकुरलाई घुमाउन निस्केका मानिसहरुका ताँती नेपाली शहर अनि गाँउहरुमा समेत बढ्दो छ । अपराध अनुसन्धान अनि सुरक्षाकालागि तथा अवैध लागूअाैषध अोसारपोसार तथा विष्फोटक पदार्थहरु पत्ता लगाउन पनि कुकुरहरुको प्रयोग प्राचिनकालदेखि गरिंदै अाइएको छ ।
नेपाली समाजमा पनि कुकुरहरु जनावर पालन अनि कृषिकार्यकालागि सदियौंदेखि मानव समाजसंग नजिक छन् चाहे त्यो लेकमा चौरीहरुलाई डोर्याउने भोटे कुकुर होस या खाना खाएर चुठ्न निस्कँदा पुच्चछर हल्लाउँदै आउने स्थानीय नश्लका छाडा कुकुरहरु हुन्, हाम्रो घर गोठ अनि वालीनालीको पुस्तैनी रखवालाहरु यिनै हुन् । यिनीहरुमा असाधारण सुँघ्नसक्ने क्षमता हुन्छ अनि प्राकृतिक प्रकोप आउनुपूर्वनै यिनिहरुले आफ्नो ब्यवहारमार्फत यी कुराहरुको पूर्वसुचना स्वरूप संकेत दिनेगर्दछन् ।
सनातन धर्ममा कुकुरको विशेष महत्व छ । कुकर मानव सभ्यता देखिनै मानवसंग अत्यन्त नजिक रहेको एउटा बफादार जनावरको रूपमा लिइन्छ । ऋगवेदमा प्रष्टसंग ‘समरा’को बारेमा उल्लेख गरिएको छ । ‘समरा’ अर्थात् कुकुरहरुकी आमाले स्वर्गका राजा ईन्द्रलाई उनको हराएको वस्तु भेटाउन सहयोग गरेको प्रसङ्ग उल्लेख छ । हिन्दु परम्परा अनुरुप कुकुरलाई अभिभावक, सुरक्षाकर्मी अनि यमराजको दुत मान्ने गरिन्छ र मृत्यूपर्यन्त पनि मोक्षको द्वारमा कुकुरले नै पहरा दिएको कथन छ । महाभारतमा पनि सत्यवादी यूधिष्ठिरले आफ्नो भक्त कुकुर विना स्वर्गमा जान नमानेको कुरा उल्लेख छ । कुकुरलाई धर्मको अवधारणागत उदाहरण र सत्य मार्गको प्रतिनिधीकारुपमा पनि लिइन्छ । तन्त्रसाधक, निडर, अति शक्तिशाली भगवान भैरवको वाहन पनि कुकुर नै हो । चाणक्य नीतिमा पनि कुकुरलाई पातलो निन्द्राभएको बफादार अनि चनाखो साथै थोरै खाएर भएपनि सन्तुष्ट हुनसक्ने प्राणिकारुपमा ब्याख्या गरिएको छ । यि त भए शास्त्रका कुरा तर आधुनिक यूगको इतिहासमा पनि सर्वप्रथम पृथ्वीको कक्षबाहिर परिक्रमागर्दै अन्तरिक्षमा सन् १९५७ मा ‘लाइका’ नामक कुकर पुगेको हो । त्यसैगरि सन् १९२३ मा जापानको ओडाटेमा जन्मिएको ‘हाछिको’ नामक कुकुर र उसको मालिकप्रतिको बफादारीताको दृष्टान्त स्वरुप बनाइएको चलचित्र ‘हाछिको’ आजपनि विश्वभरि लोकप्रिय छ र उक्त चलचित्र हेरेर धेरै आँखा रसाएका छन् ।
आज यिनै कुकुरहरुको पूजा गरिने दिन हो है, आजको दिन कुकुरलाई विधीवतरुपमा पूजा गर्ने, अाश्रय दिने तथा खान दिने मान्छेहरुलाई धर्म र पूण्य मिल्ने जनश्रुती छ । मानव समाज र कुकुरहरुको जुन बलियो र पुरानो सम्बन्ध छ आज त्यो सहअस्तित्वको सम्मान तथा अर्चना गरिन्छ । आज घरपालुवा मात्र भनई सडकका कुकुरहरुलाई पनि माला पहिर्याएर,अबिरको टिका लगाइदिएर अनि खान दिएर पूजा गरिन्छ । यसरी फूलको माला लगाइदिनाले माला पहिरिने मान्छे, मुर्ती या जनावरलाई विशेष महत्व दिएको मानिन्छ यसअर्थमा आजको दिन कुकुरहरुप्रति समर्पित दिन हो ।
दिपावली अर्थात तिहार एउटा विशेष उत्साहजनक चाड हो, हिउँदका शुरुवाती दिनहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने यो पर्वलाई उज्यालोको पर्व अर्थात बत्तिहरुको चाडका रुपमा पनि चिनिन्छ । यमपञ्चकका पाँचै दिनको आ-आफ्नै विशेषता र विशिष्टताहरू छन् । तिहार एउटा उपहार आदान प्रदान गरिने, कथा भनिने अनि सुनिने, सम्बन्धको महत्वराख्ने र मानव समाजलाई अझ सहस्तित्वको डोरतर्फ ल्याउन सफल चाड हो । साँझमा बालिएका बत्तिहरुले अँध्यारोमाथी उज्यालोको उत्सर्ग, अज्ञानतामाथी ज्ञानको प्रवाह र अविभाजित मानव अस्तित्वको आधिकारीक स्वाद प्रदान गर्दछ । सनातन धर्म एकदमै पृथक छ र त्यत्तिकै वैज्ञानिक पनि छन् यसका संस्कारका आधारहरु । प्रकृति, प्रेम अनि मानवतालाई अत्यन्त विशिष्ट स्थान दिएको संस्कारहरुमा हरेक तत्वहरुमा भगवानतत्व उल्लेख गरिएको छ ।
आजको दिन कुकुरलाई खान नदिईकन भोजन गर्ने मानिस यमराजको दण्डभोगी हुनेछ भन्ने मानिन्छ । तसर्थ सबेरै उठेर प्रातस्नान गरेर कुकरपूजा गर्ने चलन छ । कुकुर तिहारका दिन बिहानै अरुणोदय कालमा नदी वा तलाउमा गई स्नान, तर्पण गरेर यमदिप दक्षिणतर्फ बालेर बगाउनाले मृत्युपछि नरकको सामना गर्नुनपर्ने धार्मिक विश्वास छ । यसरी बत्ती बालेर बगाउनुलाई नरके बगाउने भन्ने गरिन्छ।
आजको दिनमा एउटा प्रसंग कोट्याउन जरुरी ठान्दछौं, शहरमा कुकुरहरुको नियन्त्रकालागि प्रशासनले भुसिया कुकुर मार्ने अभियान नै चलाएको थियो । बिभिन्न बिभत्स एवं हृदय बिदारक कुकुर हत्या गरिएर सडकमा निःस्वाँस लडिरहेका कुकुरहरूको तस्वीर एवं भिडियोले हामी सबैको मन छियाछिया भएको हुनुपर्छ । कुकुरको नियन्त्रण वास्तवमै जरुरी छ तर हत्या गरेर नियन्त्रण गरिनु मानविय मस्तिष्क कदापी हुनसक्दैन । भुसिया कुकुरहरु पनि यसै श्रृष्टिका सुन्दर सृजना हुन् र यो सुन्दर सृजनालार्इ पनि यस पृथ्वीमा बाँच्ने अधिकार छ । कुकुरको रगतले लतपतिएका गोरेटो मानवीय पाईलाकालागि सुहाउन्न । बिकल्पहरु खोजियोस्, कुकुर तिहारमा पूजा गर्न चोक चौराहमा गएर फकाएर घर ल्याइने कुकुर अरु दिन मार्दा पनि चुप लागेर बस्नु हुँदैन्, प्राणीमा प्राण रहन पाओस चाहे कुकुर होस् या काग ।
मानव ब्यवहार एउटा ऐनाजस्तै हो, हामीले जस्तो ब्यवहार गर्छौ त्यस्तै प्रतिविम्बस्वरुप ब्यवहार पाँउछौ पनि । यस पृथ्वीका हरेक जनावरहरुलाई हाम्रो माया र सदाचारको खाँचो छ र शायद तिहारका यमपञ्चकका दिनहरुले हामीलाई यहि सिकाउन खोजेका हुन् । विज्ञानले पनि ईको सिस्टमकारुपमा हरेक प्राणीहरुको अस्तित्व एकअर्कासंग सम्बन्धित रहेको देखाएको छ । माया दिऔ, माया बाँडाै अनि माया पाँऔ, सबैको मङ्गल होस्, शुभकामना !
उम्मेदवारी दर्ता गर्न नपाएपछि डाँको छोडेर रोइन् ज्ञानु लामा
एउटै परिवारका ११ शव झुण्डिएको अवस्थामा फेला परे !
पुर्व अर्थ मन्त्रीका पिए ढकाल लेख्छन :पहुँचवालाले मात्र लाभ पाउनेछन !
स्याङ्जा र पर्वतको संगमस्थल सेतीवेणीस्थित सेतीवेणीस्थित १७ गते बेपत्ता निशा दश दिनपछि मृत भेटिइन्
देश बिकासकाे निम्ति बामपन्थिहरुकाे एकता=श्रेष्ठ
मंगल ग्रहमा हेलिकप्टर पठाउने नासाको योजना !
प्रचण्ड-चिनियाँ उपविदेश मन्त्री वाङ वाजुनबीच भेटवार्ता
राष्ट्रिय सभा अन्तिम परिणाम: एमाले २६, कांग्रेस/माओवादी १३-१३, राजपा/फोरम २-२
प्रदेश ५ को वजेट पारित – कांग्रेस अझै असन्तुष्ट !
३३किजी सुन प्रकरणमा प्रहरी उपरीक्षक लाेहनी पक्राउ
सावन होइनन् मेरा नजर किन त्यसै बर्सिदिन्छन् गीतमा रीमा र रञ्जन
सामाजिक संजालमा पहिलो अभिनेत्रीको लिस्टमा सन्नी लियोनि
नयां शक्तिका अधिकारी माअाेबादि केन्र्दमा प्रबेश
बैतडी मा बस दुर्घटना
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कसरि लिने ऋण ?